Traamp Haasaa Jalqabaa Kongresiif Dhageessisuuf Jiru
Prezidaant Donaald Traamp har’a galgala yeroo jalqabaaf mana maree bakka bu’oota uummataa duratti dhiyaachuun haasaan dhageessisan rakkoo uummatichaa furuu irratti kan fuuleffate ta’a jechuu dhaan angasoonni White House dubbataniiru.
Gargaarsi Prezidaantichaa dhufaa jira jechuu dhaan angawaan White House tokko kaleessa galgala gaazexeessotaaf ibsanii jiru.
Prezidaantichi har’a galgala miseensota mana maree bakka bu’ootaa kan paartilee lamaaniif haasaan dhageesisan hafuura Ameerikaa kan haaressu jedhamee jira. Carraa dinagdee akkasumas uummata Ameerikaaf eegumsa godhu jechuun angawaa gammeessi tokko dubbataniiru.
Gargaarsi biyyootii alaaf kennamu addumaan irratti fuuleffatamuu mala. Kun immoo gadamoojjii waraanaa 121 kaneen hariiroo diplomaasummaa cimsuu fi misoomni humna ittisaa waliin wal cina deemuun Ameerikaaf eegumsa gochuuf baay’ee barbaachisaa dha jedhan. gargaarsi biyyoota ka biroof kennamu bajata walii galaa keessa dhibba irraa harka tokko qofaa jedhan.